Ukwesaba kuhlupha abantu basemakhaya ngemuva kokushona kwabayisishiyagalombili bexabana | Scrolla Izindaba
Ukwesaba kuhlupha abantu basemakhaya ngemuva kokushona kwabayisishiyagalombili bexabana
“Uma uvakashela noma yimuphi umuzi wakule ndawo, ngeluleka ukuthi uphume lapha lingakashoni ilanga ngoma uma kungenjalo …”
Lesi yisexwayiso esethusayo esivela kusakhamuzi ngesikhathi sizama ukungena esigodini sase-Mpheni kanye nesigodini sase-Nokhatshile, ngaphandle kwase-Mount Ayliff e-Eastern Cape.
Le mizi yomibili ibilwela imizila yamatekisi eminyakeni emibili edlule. Kushiswe izindlu nezimoto eziningi, ezinye izakhamizi zaphoqeleka ukuthi zishiye imizi yazo nabantu abangaphezulu kweshumi ababulewe kusukela ngowezi-2019.
Futhi manje amaphoyisa aseyavala.
Isigameko sakamuva besingosuku lukaKhisimusi, lapho amadoda ayishumi asesigodini sase-Mpheni ahlasele isigodi sase-Nokhatshile abulala abantu abayisishiyagalombili, kwasala abayisithupha belwela impilo yabo.
Isigameko esinyantisa igazi ebesibandakanya izibhamu, ucelemba nezinye izikhali zendabuko sishiye izakhamuzi zishaqekile kangangokuba sezize zalala ezihlahleni nasemigedeni ebusuku.
Abantu besigodi sase-Mpheni balindele ukuhlaselwa ukuziphindisela noma yiluphi usuku kusukela manje.
Isakhamuzi sasitshela ukuthi uhulumeni wehluleka ukungenelela ekuqaleni kwempi yamaqembu.
“Isizathu esikhulu salokhu ukuthi ngubani phakathi kwamatekisi nabasebenza ngamaveni okufanele bathwale abantu bendawo uma beya noma bebuya edolobheni.
“Abasebenza ngamaveni bathi imizila yamatekisi itholakala kuphela emigwaqweni enetiyela kanti amaveni asebenza emigwaqeni yobhuqu.
“Kodwa ngenxa yokuthi sekuchitheke igazi eliningi, inzondo ayisekho mayelana nemizila kuphela.
“Labo abalahlekelwe ngabafowabo ekuhlaselweni kokugcina kungenzeka ukuthi bahlela ukuhlasela kwabo.”
UKhomishani wesiFundazwe, u-Lt Gen Liziwe Ntshinga, uhole umkhankaso omkhulu wokuthungatha izintaba ezijwayele ukwakha indawo enhle kulezi zindawo kodwa osekuyizindawo zempi.
Okhulumela amaphoyisa u-Brigadier Tembinkosi Kinana uthe: “Wonke amabutho asemhlabathini athungatha abanye abasolwa okusolakala ukuthi bayabandakanyeka empini ebishubile phakathi kwala maqembu womabili.”
Abakwa-Scrolla.Africa bathole ukuthi ithimba labaseshi abaphezulu selibophe cishe abantu abayishumi.
NgoLwesihlanu bahambe baze bafika e-Limpopo babopha indoda okusolakala ukuthi ibingumthengisi wezikhali futhi ingungqondongqondo ekulweni kwala maqembu.